येशू तपाईंको साथी
मेरो एउटा साथी हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा मिल्ने साथी हुनुहुन्छ। उहाँ यति दयालु र सत्य हुनुहुन्छ कि तपाईंले पनि उहाँलाई चिन्नुभएको होस्‌ भन्ने म चाहन्छु। उहाँको नाम येशू हो। कति अचम्म उहाँ तपाईंको पनि साथी बन्न चाहनुहुन्छ!
उहाँको बारेमा मलाई केही भन्न दिनुहोस्‌। यो सत्य कथा हामी बाइबलमा पढ्छौं। बाइबल सत्य छ। यो परमेश्वरको वचन हो।
संसार र यसमा भएका यावत्‌ थोक बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ स्वर्ग र पृथ्वीको प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले सबै थोकलाई जीवन र श्वास दिनुहुन्छ।
पूरा लेख: तपाईंको लागि एउटा साथी
येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँलाई स्वर्गबाट पृथ्वीमा हाम्रो आफ्नै मुक्तिदाता हुनको निम्ति पठाउनुभयो। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो (अर्थात्‌ उहाँले तपाईं र मलाई प्रेम गर्नुभयो) कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र, येशू, (हाम्रो पापको निम्ति मर्नको लागि) दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्‌, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्‌। (बाइबलमा भएको यूहन्नाको पुस्तकको ३ अध्यायको १६ पदमा लेखिएको छ)
येशू यस पृथ्वीमा सानो बालकको रूपमा आउनुभयो। पृथ्वीमा उहाँको बुवा योसेफ र आमा मरियम हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गोठमा जन्मनुभयो र डुँडमा पस्रनुभयो।
येशू आफ्नो बुवाआमाको साथमा हुर्कनुभयो र उहाँले बुवाआमाको आज्ञा पालन गर्नुभयो। खेल्नलाई उहाँसँग उहाँका भाइहरू र बहिनीहरू थिए। उहाँले आफ्नो बुवा योसेफलाई सिकर्मी काममा सहायता गर्नुभयो।
जब येशू परिपक्व मानिस हुनुभयो, उहाँले मानिसहरूलाई उहाँको स्वर्गमा हुनुहुने पिताको बारेमा सिकाउनुभयो। परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले तिनीहरूलाई देखाउनुभयो। उहाँले रोगीहरूलाई निको पार्नुभयो र कष्टमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिनुभयो। उहाँ बालबालिकाहरूको साथी हुनुहुन्थ्यो। बालबालिकाहरू उहाँको नजिक आएको उहाँले चाहनुहुन्थ्यो। तिनीहरूसँग पनि उहाँले समय बिताउनुभयो। बालबालिकाहरूले येशूलाई प्रेम गर्थे र उहाँसँग हुन रुचाउथे।
केही मानिसहरूले येशूलाई रुचाउँदैन थिए। तिनीहरूले उहाँलाई ईर्ष्या गर्थे, र उहाँलाई घृणा समेत पनि गर्थे। तिनीहरूले उहाँलाई यति बिघ्न घृणा गर्थे कि तिनीहरूले उहाँलाई मार्न चाहे। एक भयावह दिनमा तिनीहरूले येशूलाई क्रूसमा काँटी ठोकेर मारे। येशूले केही गल्ती गर्नुभएको थिएन। उहाँ हाम्रो सट्टामा मर्नुपर्थ्यो किनकि तपाईंले र मैले गल्ती गरेका थियौँ।
येशूको कथा उहाँको मृत्युसँगै टुङ्गिँदैन। परमेश्वरले उहाँलाई मृतकबाट उठाउनुभयो! उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई देखे। अनि एक दिन उहाँ स्वर्ग फर्कनुभयो।
आज उहाँले तपाईंलाई देख्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई तपाईंको बारेमा सबै कुरा थाहा छ र उहाँले तपाईंको वास्ता गर्नुहुन्छ। केवल प्रार्थनामा उहाँकहाँ आउनुहोस्‌। उहाँलाई तपाईंको सबै दुःखको बारेमा बताउनुहोस्‌। तपाईंलाई मद्दत गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ। तपाईंले जुनसुकै समयमा, जुनसुकै ठाउँमा, आफ्नो टाउको निहुराएर प्रार्थनामा उहाँसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
एक दिन उहाँ फेरि आउँदै हुनुहुन्छ! उहाँमाथि विश्वास गर्ने जति सबैलाई स्वर्गको घरमा उहाँले लानुहुनेछ।